यो यात्रा रमाइलो - Mahendranagar Post
Home बिचार यो यात्रा रमाइलो
पत्रकारिता यात्रा। यो यात्रा आफैमा रमाइलो छ र रोमान्चकारी पनि। तथ्यसहित सत्यसम्म पुग्ने प्रयास। त्यो बीचका अनेक रङ र बान्कीहरु। नयाँ–नयाँ आयामहरुसँग साक्षात्कार हुने मौका र अवसर। यति धेरै बिबिधता अन्य कुन पेशामा होला र?
दुनिया भर्चुअल भैसक्यो। परम्परागत तौर–तरिकाहरुमा ठूलो परिवर्तन आइसक्यो। प्रबिधिले जित्दै गएको यो समयमा प्रिन्टलाई उछिन्दै गएको छ अनलाइन मिडिया। तर, पत्रकारिताको ‘इथिक्स’ उहि हो। यो धर्म, यसको पबित्रतालाई बचाएर राख्नुपर्छ। र, पत्रकारिताको आत्मा कहिल्यै मर्न दिनु हुदैन। त्यसमा हामी सचेत छौं।
यो–यो गछौं भन्दै ठूला फेहरिस्त र सिद्धान्त छाट्दै होइन, आफ्नो ठाउँबाट सामान्य लाग्ने तर असमान्य कथा–उपकथाहरु, शासक–प्रशासकहरुलाई छिनछिनमा खबरदारी र जनतालाई प्रश्न गर्ने साझाँ मञ्च प्रदान गर्न आजभन्दा ठिक सय दिन अघि महेन्द्रनगरपोष्टमार्फत हामी अनलाइन पत्रकारिताको टुडिखेलमा उत्रिएका थियौं। सय दिन केही पनि होइन, ‘हनिमुन पिरियड’ न हो। पत्रकारिता त जुगौं–जुग चलिरहन्छ। काम गर्ने पात्र फेरिने न हुन्। यो आफैमा ठूलो धर्म हो, इमानका साथ पछ्याउने क्रम चलिरहने छ।
‘हनिमुन पिरियडै’ सहि यात्रा निकै उत्साहप्रद छ र रमाइलो पनि। यो बीचको छोटो समयमा हामीले खास नयाँ बिषय त होइन तर अरुले नउठाएका केही ‘कभरेज’ दियौं। ती मध्ये २१ औं शताब्दीमा पनि आदिमकालमाझैं शिक्षित भनिएकै ‘शिक्षक’ लगायत पाँचजनाले बलात्कार गरी अर्कैको जिम्मा लगाएकी बैतडी सिगासकी किशोरीको ब्यथा प्रतिनिधिमुलक समाचार हो। महेन्द्रनगरपोष्टले उधेनेको त्यो समाचार र त्यसपछिको तारन्तार फ्लोअपले ती किशोरी न्याय पाउने सँघारमा आइपुगेकी छन्। अभियोगीहरु पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्।
यस्ता अरु पनि थुप्रै बिकृति–बिसंगतीहरु छन्, जहाँ हामी निरन्तर प्रहार गरिरहेका छौं। गाउँका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहहरुमा बेथित बढेको बढ्यै छ। राजनीतिक आड्मा हुने अपराधले सीमा नाघेको छ। सरकार जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा पन्छिने गरेको छ। कोरोना महामारीको नयाँ खालको आतंक सृजित भएको छ। सरकार ‘आफैं उपचार गर्नु’ र ‘श्वास फेर्न गाहे–गाहे भएमा’ मात्रै उपचार गर्न आउनु भन्दै प्रबक्तामार्फत गैर जिम्मेवार भाषा बोलाउन उद्धत छ। यस्ता थुप्रै असंगतीहरु झ्याङगिएका बेला हामीले यात्रा सुरु गर्यौं र यो यात्रा निरन्तर चलिरहनेछ। धन्यबाद।
Previous articleपुनर्वासका दुई गोबिन्द, देशका लागि दुबै ढले सीमामा
Next articleदार्चुलाको महाकाली नगरपालिका थप ५० जनामा कोरोना पुष्टी
tej bohara October 21, 2020 At 10:48 pm
बैतडीको घट्ना यता भन्दा पहिले अर्को अनलाइनमा आएको थियो !! यद्यपि महेन्द्रनगर पोस्टले केही depth लेखेको थियो !!